Ngokuqinisekile, abalimi abanamakhono bayazi kahle isitshalo ngenqubo yezimpande ezinwabuzelayo okuthiwa i-dystocia. Njengezinhlanzi, utshani bukhula ngokushesha, kuthutha zonke izizathu eziwusizo neziyingozi. Izakhamuzi zasehlobo zilwa nokhula, hhayi ukusola ukuthi yiliphi inani lezokwelapha elibhujiswayo. Kodwa-ke, kukhona nalabo abatshala utshani njengento ehlobisa ezindlini zomndeni.
Hlonipha abahlengikazi bezitshalo. Izinzuzo ze-scum sekuyisikhathi eside zaziwa kwabaninakhulukazi. ERussia lasendulo yayisetshenziselwa izinjongo zokwelapha. Babuthwa ngesikhathi sokubhakabhaka okusebenzayo, bese kumiswa futhi amalungiselelo okwelapha ayelungiselelwe. Ziyakhula njengento eyigugu yokudla okuluhlaza. Kunezinhlobo zokupheka eziningi zokupheka ngesisekelo sezinqwaba.
Imifino ingezwa isobho, ama-saladi, ulungise iziphuzo ezivuthiwe. Amahlumela amancane aphunga iphunga elimnandi futhi anikeze izitsha ukunambitheka okumnandi. Amahlamvu amaqabunga avunwa ukuze asetshenziswe esikhathini esizayo: usawoti, i-marinate. Ama-herbs omisiwe asetshenziswa njengezinongo. Ngakho-ke, ungasheshi ukuqalekisa ukhula, olunezimfanelo ezinjalo ezibalulekile.
Isihlahla sokhokho bethu
Abantu abawazi kahle ama-medicinal herbs, ngeke neze badideke nezinye izitshalo. Uma ungenalo ulwazi olunjalo, kuyingozi kakhulu ukuqoqa imifino wena esendle. Njengoba utshani bubonakala ngaphandle, izinzuzo kanye nokulimala okuma emazingeni ahlukene, kufana kakhulu ne- cicuta enobuhlungu. Isiqu esilula esinezinhlanga ezingenalutho nezambulela eziyinkimbinkimbi phezulu. Izimbali ziqala ngo-July-inyanga.
Kwenzeka cishe yonke indawo: ensimini yeRussia, e-Asia naseYurophu. Endle, ikhula emigwaqeni yezintaba, ezindaweni zasendle, epulazini, edala amahlathi amakhulu. Ngenhloso yokwelapha, zonke izingxenye ezomisiwe ngaphambilini zisetshenzisiwe. Umkhiqizo owenziwe ngaphambilini udayiswa kumaketanga ekhemisi.
Izinzuzo zamakhambi omzimba
Inzuzo eyinhloko yesitshalo esidala kunazo zonke izinto ezikhona ezingenakwenzeka. Umama Wemvelo unike abantu isintu esiyingqayizivele, esifanele ukudla nokuphatha. Izinzuzo kanye nomonakalo kumhlali ojwayelekile aziwa. Sizolinga ukucacisa ngokuningiliziwe zonke izinhlobo ze-nuances.
Izitshalo ezivundile izimbali zigcwele ne-ascorbic, i-citric nama- acic acid. Ukuvuthwa kuhlotshiswe ngamakhemikhali: ithusi, insimbi, ama-manganese, i-potassium. Umthombo we-flavonoids, amafutha abalulekile, ama-acids aphilayo, ama-disaccharides, ama-coumarins. Ekubunjweni kukhona into ebizwa ngokuthi i-apigenin eyaziwa ngokumelene nomdlavuza.
Lesi sitshalo sinokulwa nokuvuvukala, isilonda-ukuphulukisa, ukuqinisa, isenzo se-analgesic nesisu. Abahlengikazi benconywa bayanconywa ukuba basetshenziselwe ukululama ngemva kokugula okunzima noma okude. Isiza ukuzinza isimo sempilo, ukuqeda ukutholakala kwamavithamini nokuqinisa isimiso somzimba sokuzivikela. Lezi zici zisenza sibize utshani ithuluzi lemilingo ekulwa nezifo eziningi.
Imithi yokwelapha iphakamisa ...
Lesi sitshalo sidume ngamakhono ayo okuvimbela i-pathologies engokwemvelo, ukuvimbela izifo ezibangelwa amagciwane nezifo. ERussia, amaqabunga amasha aphethwe izilonda zesikhumba, elwa nezifo zesifo sofuba. Izindwangu kanye namagciwane aphathwa nge-cystitis, i-pyelonephritis, i-gout. Utshani ukufihla, inzuzo kanye nokulimala okubangelwa okuqukethwe kwezinto eziyingqayizivele, kusetha uhlelo lokugaya.
Ikhuthaza ukujwayeleka kwezinqubo zokuxilonga umzimba nezisetshenziswa. Ukusetshenziswa kunomthelela omuhle emithanjeni yegazi: amandla abo, ukuqina kwenyuka. Ngosizo lwamahlathi, kungenzeka ukuphulukisa ukucindezeleka, izifo ezivuthayo ezitho zangaphakathi. Utshani lukhulula i-edema, lususa uketshezi oludlulele, lunomphumela omuhle ezinkambweni zezinzwa, luqeda ubuthakathaka kanye nosizi, futhi luphinde luvuselele izicubu ze-epithelial.
Kusukela ku-gruel, izitshalo zenza imaski yokondleka yomzimba emzimbeni. Ukumnika ukumisa kunciphisa ama-dandruff. Izinzuzo kanye nezimo ezihlukumeziwe ziye zafundwa ngokucophelela futhi zaphenywa ngabachwepheshe bezinkambu ezahlukene. Usongo oluphakanyisiwe yingxenye enamandla yesintu. Imbewu yalesi sitshalo ivimbela ukubonakala kokungasebenzi, buyisela isifiso socansi. Kumele kuqashelwe ukuthi ngesikhathi sokwamukela umzimba umzimba ususwe ubuthi, ama-radionuclides nemikhiqizo yokubola.
Ingabe kukhona ingozi yokudla?
Izinzuzo zokugaya akunamkhawulo, lokhu kuqinisekiswa yizibuyekezo zabantu abaningi abavamile. Ngokusho odokotela kanye nabantu abaphulukisa abantu, lesi sitshalo asinakho ukuphikiswa. Umuntu oyedwa ongafanelanga ukuyisebenzisa ngabantu abanokuzibophezela nokubekezelelana ngabanye. Lapho kuvuna isivuno kufanele sikhethe izindawo ezingobuhle, ngaphandle kwezitshalo zezimboni kanye nemigwaqo emikhulu.
Ukupheka kwabantu ngenxa yokuthuthukisa impilo
Njengoba kukhulunywe ngenhla, izinzuzo zokugaya zifakwe ku-vitamin-mineral complex, okwenza kube lula ukubiza lesi sitshalo esinye sezidakamizwa kakhulu kubantu. Ukusebenzisa okulula, kodwa ngesikhathi esifanayo, izindlela zokupheka eziphumelelayo, ungaqinisa impilo yakho iminyaka eminingi. Ukuhluka okuqala kokulungiselela kuthuthukisa ukulungiswa kwepheshana lokugaya, ukukhulula izilonda zesikhumba fungal kanye ne-rheumatism.
Kudingeka ukuthatha amagremu angama-30 wemishini eluhlaza, uthele amanzi abilayo (250 ml) bese ubeka isitofu ukuba uphumele imizuzu eyishumi. Ingxube elungiselelwe ihlungiwe, ihlanjululwa ngamanzi abilayo (100 ml). Phuza nsuku zonke ihora ngaphambi kokudla, kathathu ngosuku ngamagremu angu-70.
Qinisekisa amandla okuzivikela futhi uthuthukise umsebenzi osebenzayo wegciwane lomathumbu
Isitshalo sokufihla (inzuzo kanye nokulimala okuchazwe ngenhla) kuyindlela ehle kakhulu yokulungiselela amakhemikhali ekuqiniseni igciwane elincane. Iresiphi elandelayo ithola okuningi kokumemeza okuhle. Amagremu angama-400 wamanzi abilayo kufanele athathe amagremu angu-20 obuntshani obomile. I-liquid imele amahora amabili, bese ukhula. Sebenzisa izipuni ezimbili, izikhathi ezingu-3-4 ngosuku ngesigamu sehora ngaphambi kokudla.
Ukuphulukiswa okulimazayo, okuphikisana nokuvuvukala kanye ne-analgesic
Njengoba i-erysipelas ne-rheumatism, abahlengikazi bayelulekwa ukuba basebenzise ama-lotions kusuka emaqabunga ahlanzekile acwecwe. Amajoyini amnandi nokuvuvukala kwesibindi aphathwa ngokukhipha okulandelayo: uthele ingilazi yamanzi abilayo ama-gram angu-30 wezinto eziluhlaza, uphahla emanzini okugeza ngamaminithi angu-10. Khuluza uketshezi oluhlungiwe bese uhlangana nengilazi yamanzi. Thatha izikhathi ezintathu ngosuku nge 15 ml. Inzuzo ye-snoot iyigugu, ngakho-ke ungayisebenzisi izipho zemvelo.
Chevrolet Niva: ezibekiweko lobuchwepheshe ezingeni eliphezulu
Sequoia Giant: isithombe. Lapho ikhula Sequoia giant?